IRakuten TV: ukubuka kanjani okuqukethwe kwamahhala ngeLinux PC yakho | Kusuka kuLinux
I-Rakuten TV: Ungakubuka kanjani okuqukethwe kwamahhala nge-Linux PC yakho
Amapulatifomu wokuqukethwe ngu ukusakaza, i-IPTV ne-OTT zikhula ngokwengeziwe ngokwenani labasebenzisi. Abantu abaningi bakhathele ukuhlala bebona okuqukethwe okufanayo eziteshini ze-DTT okuthi, noma ziziningi, zinganikeli ngaso sonke isikhathi okuqukethwe okuthandwa yibo bonke abantu. Ngaphezu kwalokho, kwesinye isikhathi kubonakala sengathi bayavuma ukunganikeli nganoma yini ethakazelisa nhlobo. Ngalesi sizathu, amapulatifomu afana neRakuten TV, Amazon Prime Video, Netflix, FlixOlé, Pluto TV, Filmin, HBO, Disney +, Applet TV Plus, njll, awayeki ukukhula.
Lapha sizokukhombisa konke odinga ukukwazi mayelana nefayela le- Ipulatifomu yaseSpain, futhi uma ingasetshenziswa kwi-PC yakho yeLinux, ngaphezu kokubona ukuthi ungayisebenzisa kanjani omunye wemisebenzi yayo yakamuva, leyo yokunikeza iziteshi zamahhala ukunweba okuqukethwe onakho ...
1 Yini iRakuten TV?
2 Ngingayibuka iRakuten TV kwi-Linux PC yami?
3 Yini enikezwa yiRakuten TV?
3.1 Ukusakazwa kwamahhala noma okukhokhelwayo
3.2 Manje futhi neziteshi zamahhala ze-TV
Yini iRakuten TV?
I-Rakuten TV Yinkampani yaseJapan, kepha inomsuka wayo eSpain futhi izinze eBarcelona. Insizakalo enikeza ikhathalogi enkulu enezinkulungwane zezihloko zochungechunge, ama-movie, amadokhumentari nokusakazwa kwezemidlalo kubasebenzisi bayo ababhalisile (yize kunjalo futhi inokuqukethwe kwamahhala njengoba ngizochaza).
Fue eyasungulwa ngo-2007 nguJacinto Roca noJosep Mitjà, enegama langempela leWuaki.tv, kwathi ngo-2012 lazoba yingxenye yenkampani yaseJapan iRakuten, kwathiwa iRakuten TV. Njengamanje, ixhunywe neFC Barcelona futhi isizinzile kuleli njengelinye lamakhasi amakhulu kakhulu ezentengiselwano online, ephikisana neAmazon.
Njengamanje, le sevisi itholakala nge- Amazwe angama-42, ikakhulukazi avela e-European Union, ngaphezu kokuhunyushelwa ezilimini eziningana. Futhi kuyindlela ethandekayo kwamanye amapulatifomu afana neNetflix, i-Amazon Prime Video, njll. Njengoba lezi zingxenyekazi zingahlali zinikeza izihloko ezifanayo, ngakho-ke kungathakazelisa ukukhetha eyodwa noma enye (noma eziningana) ukuthola okuqukethwe okuvumelana kahle nalokho okuthandayo.
IRakuten TV okwamanje iyavalwa amapulatifomu wokuqukethwe ayi-5 aphezulu nababhalisile abaningi eSpain, nabasebenzisi abangaphezu nje kwezigidi eziyi-150, ezimele ngaphezulu nje kuka-2% wemakethe.
Uma unentshisekelo yokubhalisa, ungakwenza ngo- € 6.99 / ngenyanga kuphela, yize kukhona ezinye izinsiza zamahhala… Futhi ungazama noma isikhathi mahhala.
Ngingayibuka iRakuten TV kwi-Linux PC yami?
I-Rakuten TV iyinkundla yokuwela, futhi ingasebenza kumadivayisi amaningi. Phakathi kwezinhlelo ezingasebenza kuzo kukhona:
I-Smart TV (WebOS / TizenOS / Android TV): LG, Sony, Philips, Samsung, Panasonic, HiSense, njll.
I-Google Chromecast: isebenza kumadivayisi asekela lobu buchwepheshe.
Amadivayisi eselula: Kokubili i-Android ne-iOS / iPadOS.
Imidlalo yokududuza: I-Sony PS3, i-PS4, ne-Microsoft Xbox 360 ne-One.
I-PC (isuselwa kuwebhu)- Ingasebenza ezinhlelweni ezahlukahlukene zokusebenza ezihlangabezana nezidingo ezinconyiwe.
* Kunoma ikuphi, kubalulekile ukuba ne-inthanethi ye-broadband, enejubane elincane elingu-6Mb.
Ngokuqondene ne-os izidingo ezinconyiwe ukusebenzisa i-PC yakho ye-Linux yile:
I-1Ghz CPU (32/64-bit)
1GB RAM ye-32-bit noma i-2GB ye-64-bit
I-16 GB yediski yamahhala ye-32-bit noma i-20GB ye-64-bit.
Uhlelo olusebenzayo lweWindows noma lwe-GNU / Linux, noma ezinye ezihambisana neziphequluli ezisekelwayo. * QAPHELA: kusuka kuLinux nakwezinye izinhlelo, ungapheqa ipulatifomu yewebhu, ukubukela ama-trailer, njll., Kepha awukwazi ukubuka uchungechunge noma ama-movie.
iMac 2007 noma kamuva
MacBook 2009 noma kamuva
MacBook Pro 2009 noma kamuva
IMacBook Air 2008 noma kamuva
Mac Mini 2009 noma kamuva
Mac Pro 2008 noma kamuva
Ngohlelo lokusebenza lwe-Mac OS X Mavericks noma ngaphezulu
Kepha iziphequluli zewebhu lapho ungaqalisa khona inguqulo yewebhu yale nsizakalo, uma kungekho iklayenti lohlelo lwakho, ungasebenzisa izinhlobo zakamuva ze:
I-Google Chrome / Chromium
Ukuze usebenzise imisebenzi ephelele ye- I-Rakuten TV kusuka kwi-Linux PC yakho unezinketho eziningana:
Sebenzisa umshini obonakalayo oneWindows / macOS ukuwusebenzisa kusuka kusiphequluli esikulesi simiso.
Faka i-emulator ye-Android / Android TV ukuze ukwazi ukufaka uhlelo lokusebenza olusemthethweni lwamadivayisi eselula.
Yini enikezwa yiRakuten TV?
IRakuten TV, njengoba sengishilo, ine- ikhathalogi ebanzi ngezihloko eziyizinkulungwane eziningana zochungechunge, ama-movie, amadokhumentari nezemidlalo. Kokubili okuqukethwe kukazwelonke nakwamanye amazwe.
Ukusakazwa kwamahhala noma okukhokhelwayo
Ngaphakathi kokuqukethwe okusakazwayo kweRakuten TV unayo kungenzeka kusuka:
Bona okuqukethwe kwe- ama-movie anikezwa mahhala. Awudingi ukubhaliswa noma okunye okunjalo, vele ufake uhlelo lokusebenza lwamakhasimende kudivayisi yakho bese ufinyelela indawo yamahhala / yamahhala lapho uzothola khona uhlu lwama-movie wamahhala ongawabuka, anezikhangiso (i-AVOD), yebo. Ngaphezu kwalokho, lolu hlu lubuyekezwa ngezikhathi ezithile, ngakho-ke uzokwazi ukubona izindaba njalo.
Noma ungakhokhi okubhalisile, ungasebenza futhi imodi yesitolo sevidiyo, ukwazi ukuthenga noma ukuqasha i-movie ethile oyithandayo. Ukhokhela okuqukethwe okunjalo futhi ugwema ukubhalisa.
Ungakwazi bhalisa nokuthi leyo mali ekhokhwa njalo ngenyanga ikwazi ukufinyelela konke okuqukethwe okutholakala endaweni yesikhulumi ngaphandle kwemingcele. Lokho kushibhile kakhulu ngokuhamba kwesikhathi uma usebenzisa okuqukethwe okuningi.
Manje futhi neziteshi zamahhala ze-TV
Ngaphezu kwalokhu okungenhla, kukhona okusha kuRakuten TV, futhi kungenzeka ukusebenzisa le nkundla njengethelevishini, ngochungechunge lwe iziteshi ezisakaza amahora angama-24 ukubuka mahhala, Isitayela se-Pluto TV, futhi okufuneka kuphela ukuba ne-Intanethi.
Ngokukhethekile onayo manje Iziteshi eziyi-90 zamahhala lokho kusakaza izinhlelo nama-movie amahora angama-24 ngosuku, ukuze ukwazi ukungeza kokunikezwayo kwethelevishini ye-DTT Lezi ziteshi zinezindikimba ezahlukahlukene kakhulu:
Ukuze wenze lokhu, iRakuten TV isifikile isivumelwano ngemikhiqizo efana neVogue, Wired, The Hollywood Reporter, Glamour, GQ, Vanity Fair, Qwest TV, Reuters, Stingray, Euronews, ¡Hola!, Planeta Junior, neBloomberg.
Yize emazweni ahlukahlukene kuzosakazwa okuqukethwe okuhlukile, futhi ngeke ukwazi ukukhetha okuqukethwe okufunwayo (i-VOD), kepha bane isheduli ehleliwe, njengeziteshi ze-TV ezivamile. Lokho wukuthi, kuzofana ne-TV ozoyibuka ku-inthanethi, nezikhangiso.
Okwamanje, lezi ziteshi zisesigabeni se-beta, futhi ungazijabulela kuphela ku- Ama-TV we-LG ne-Samsung smart. IRakuten TV isivele isebenza ukuyeka ukuba sesigabeni seBeta futhi inwebise insizakalo kwamanye amadivayisi, ngaphezu kokuya ngale kwalezo ziteshi ezingama-90 ...
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » I-Rakuten TV: Ungakubuka kanjani okuqukethwe kwamahhala nge-Linux PC yakho
Iyakhangisa futhi iyadukisa. URakuten akasebenzi kuLinux
* QAPHELA: kusuka kuLinux nakwezinye izinhlelo, ungapheqa ipulatifomu yewebhu, ukubukela ama-trailer, njll., Kepha awukwazi ukubuka uchungechunge noma ama-movie.
kunye kubili kusho
URAKUTEN ungabuka ama-trailer, njengoba kushiwo.
I-Spanish eningi, ne-LINUX yangempela yangempela
Amazwe angama-42 e-European Union? Sikuphi unyaka? Ngangikholelwa ukuthi ngokuhamba kwe-United Kingdom, okwafika ngo-2021, i-European Union yakhiwa amazwe angama-27 ...
I-Fini, enye indlela ye-SysV init ne-systemd ifinyelela enguqulweni yayo entsha engu-4.0